komishinarri komishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa qondaaltota ABO akka mana murtii dhiyyeessu M/Murtii waliigala Oromiyaa ajaja dabarse. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewskomishinarri komishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa qondaaltota ABO akka mana murtii dhiyyeessu M/Murtii waliigala Oromiyaa ajaja dabarse.
komishinarri komishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa qondaaltota ABO akka mana murtii dhiyyeessu M/Murtii waliigala Oromiyaa ajaja dabarse.
Dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo dargaggoo Lammii Beenyaafi Daawwita Abdataa ilaalchisee Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa komishinarii komishina poolisii Oromiyaatti ajaja dabarse.
Qondaalonni siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo dargaggoo Lammii Beenyaafi Daawwit Abdataa ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa booda hidhamanii haga yoonaa mana hidhaa jiraachuun beekamaadha. Hidhamtoonni siyaasaa kun manni murtii mirga wabiin akka ba’an taasisee era ba’aniis poolisiin qabee hidhee ergasiis bilisaan akka ba’an manni murtii ajajus ajajni mana murtii hin kabajamne. Mana hidhaa sabbataarraa baafamanii gara magaalaa Mojoo erga geeffamanii haga yoonaatti mana murtiitti hin dhiyaatiin jiru.
Dhaddacha guyyaa har’aa ooleen manni murtii waliigala Oromiyaa dhimma hidhamtoota siyaasaa kanneenii irratti ajaja dabarseera. Galmeen har’atti kan buleef yoo komishiniin poolisii Oromiyaa hidhamtoota kanneen dhiyeessuu danda’eef eeguuf ture. Haata’u malee, komishiniin poolisii Oromiyaa hidhamtoota siyaasaa kanneen dhiyeessuu hin dandeenye, sababa hin dhiyeessineefis hin ibsine. Ajaja manni murtii gara komishinii Oromiyaatti barreesse kanarraa hubachuun akka danda’ametti, ajajani mana murtii poolisiidhaan kabajamuu dhabee mirgi lammiilee sarbamaa jiraachuudha.
Dhaddacha bitootessa 4/2013 ooleen hidhamtoonni siyaasaa kun akka bilisaan lakkifaman ajajni darbee galmeen cufamee ture. Murtii manni murtii dabarse komishinii poolisii Oromiyaatiin hojiirra ooluu dhabuun ibsameera. Ajajni mana murtii kabajamuu dhabee hidhamtoonni maaliif akka mana hidhaa tursiifaman itti aanaan komishineraa Girmaa Galaan qaamaan dhiyaatee maaliif akka ajaja mana murtii hin raawachiifne ykn hin raawwanne deebii akka kennu yeroo 4 beellamamee kan ture ta’us argamuu hin dandeenye. Itti aanaan komishineraa sababa hojiitiif biyya alaa deemeera jedhamee sababni dhiyaataa ture dogoggora ta’uufi biyyuma keessa turuusaa akka mirkaneeffate manni murtii waliigala Oromiyaa ajaja kanaan ibseera.
Hidhamtoonni kunniin iyyanni isaanii ilaalamaa waan jiruuf, komishiniin poolisii Oromiyaa qaamaan akka dhiyeessu beellamni adda addaa yeroo sadii kennamuunis ibsameera.
Ajajoonni ibsaman kun karaa komishinii poolisii Oromiyaa hojiirra waan hin oolleef, hogganaan mana hojii komishinii Poolisii Oromiyaa qaamaan dhiyaatee mirkaneessuun waan barbaachiseef ajaja dabarsuun barbaachisaa ta’uu manni murtichaa ibseera.
Haaluma kanaan, komishinerri komishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa hidhamtoota kanneen qaamaan dhaddachatti akka dhiyeessu ajajni darbeera. Akkasumas beellama itti aanu irratti komishinerichi qaamaan dhiyaatee sababa manni hojii inni hogganu ajaja mana murtii raawwachiisuu hanqateef akka ibsu ajajameera. Beellamni itti aanu gaafa 20/7/2013 (ALI)tti qabameera.
Yoo jabatee Hacalii biran dhaqa yoo jabatee Jar bira dhaqa dhagefadha
Finfinnee keessatti manneen qabalee Oromoonni keessa jiraatan keessaa baasuun lammiiwwan eertiraaf kennamaa akka jiramu dhageenye.